Sheekh Cabdi Xayi ayaa si kulul uga hadlay kufsigii iyo dilkii loo geystay Xamdi Maxamed… – Hagaag.com
Posted on 13 Seteembar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Sheekh Cabdi Xayi Sheekh Aadan oo ka mid ah Culima’udiinka Soomaaliyeed ee caanka ah ayaa si kulul uga hadlay kufsigii iyo dilkii maalin ka hor Xamdi Maxamed Faarax loogu gaystay Magaalada Muqdisho.
Xamdi Maxamed ayaa Jimcihii lagu kufsaday hotel la sheegay inuu ku yaalo xaafadda 1da Maajo ee Degmada Waaberi, iyadoo kufsiga ka dibna la sheegay in dhismahaasi laga soo tuuray.
Sheekh Cabdi Xayi Sheekh Aadan oo la hadlay Warbaahinta gudaha ayaa yiri “Runtii qof kastoo damiir nool leh waxaas oo kale marka uu maqlo waa wax uu aad uga xumaanaayo. Waa fal aad u fool xun oo wax walba oo lagu cabiro karo oo ereyo ah ay ka caajisayaan inay tilmaamaan falkaasi dembiga weyn sida uu u xunyahay.”
“Waa waxyaabaha dhaqan xumada ah, ee runtii umaddeena Soomaaliyeed aan dhaqan u lahayn. Gabdhaha Soomaalidu aad bay u xushmeeyaan oo u ixtiraamaan dhaqankeena Soomaaliyeed, Islaamkeenana saas buu qabaa. Maqaasidatul Shareeco markii laga hadlayo shanta waaweyn ee diinta u soo degtay inay ilaaliso, qayb waxaa ku jirto la yiraahdo cirdiga ama sharafta, si loo ilaaliyo iska dhaafee inta la fara xumeeyo la dilee, waad garaneysaa macnaha sida looga fogaaday oo waxaas loogu kacay falkaasi aadka u fool xun, ee bani’aadanimada ka baxsan, Islaamnimada iyo dhaqanka Soomaalida ee suubana khilaafsan.”
“Haddii waxba laga qaban-waayo oo qof walba indhaha ka fiirsado mas’uuliyaddii la qaadan-waayo, qof walbana meeshii kaga aadan ka qaadan-waayo, bulshadii ayaa wada baaba’eysa doontiina way kiideysaa, oo baddii ayay hoos u galeysaa.”
“Marka qof kasta oo qayb ka noqon kara badbaadinta dumarka, badbaadinta gabdhaheena sharafta badan ee xumaatadaas ay ku dhaceyso, runtii waajib weyn waxaa saaran inuu badbaadaas qayb ka noqdo.”